घरेलु सौन्दर्य टिप्स – Medianp
घरेलु सौन्दर्य टिप्स
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ११, २०७६१२:००
काठमाडौँ । अनुहारमा आएका डन्डीफोर र त्यसको दागले सुन्दर अनुहारलाई पनि कुरुप बनाउँछ । अनुहारममा आएका दाग र डन्डीफोरलाई मेटाउने अनेक औषधी र उपचार गर्दा पनि निको नभएपछि धेरै जना चिन्तित भएका हुन्छन् । त्यसकारण
अनुहार सोचेजस्तो राम्रो कसरी बनाउने ? यो घरेलु तरिका अपनाउनुस् ! पार्लर जानु पदैन् (भिडियो)
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, बैशाख १०, २०७६१६:४३
काठमाडौँ । अनुहार मानिसहरुको सबैभन्दा पहिले देखिने भाग हो । त्यसैले सबै मानिसहरुको आफ्नो अनुहार सुन्दर बनाउने कोसिस गर्छन् । तर जान्यो भने अनुहार सुन्दर बनाउन व्युटी पार्लर र विभिन्न कस्मेटिक चिजहरुको प्रयोग गरिरहनु पदैन्
अनुहारमा सुन्दरता ल्याउन चाहनुहुन्छ ?त्यसोभए सुत्नु भन्दा अगाडी अपनाउनुहोस् यो घरेलू उपाय ! (विधीसहित)
Media NPप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, बैशाख १०, २०७६१६:३९
काठमाडौँ । सबै मानिसहरुमा सुन्दर बन्ने चाहना हुन्छ ।तर सुन्दर बन्ने चाहना हुदाँहुदै पनि अनुहारमा विभिन्न प्रकारको चाँया , पोतो र डण्डिफोर आएर कुरुप बनाइदिन्छ । त्यसपछि युवाहरु भन्दा पनि बढी युवतीहरु व्युटी पार्लर धाउने
Media NPप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०९, २०७६१३:४०
काठमाडौँ । बढ्दो उमेरसँगै छाला चाउरिदै जानु स्वभाविक कुरा हो । तर सबैको चाहना सुन्दर हुने हुन्छ । त्यसैले प्राय मानिसहरु आफ्नो छाला चाउरिएर चिन्तामा हुन्छन् । त्यस्तै अनुसार सुख्खा हुने समस्याहरु पनि धेरैमा हुन्छ
के तपाई अनुहारमा कालो दाग आएर हैरान हुनुहुन्छ ? मह र कागतीको प्रयोग गर्नुहोस् सदाको लागि हुन्छ चैट
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख ०८, २०७६११:०५
काठमाठौँ । अनुहारमा आएको विभिन्न किसिमका दाग धब्बाको कारण कतिपय मानिसको सुन्दर अनुहार नै कुरुप बनेको हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिले अनुहारलाई सुन्दर बनाउन हजारौँ रकम खर्च गर्दा पनि निको नभएर हैरान भएका हुन्छन् । त्यसकारण
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख ०६, २०७६१०:५३
काठमाडौँ । सुन्दर हुने चाहना चाहियो बाहानाहरु अनेक हुन्छन् । त्यसैले आज हामीले तपाईहरुलाई अनुहारमा जादुमय चमक ल्याउने केही घरेलु उपाय बारे बताउन गइरहेका छौँ । आवश्यक सामाग्री काँचो दुध चामलको पिठो मैदा टमाटरको जुस बनाउने बिधि : सुरुमा एउटा सफा
के तपाई अनुहारको छाला चाउरी परेर चिन्तित हुनुहुन्छ ? यी चीजको प्रयोग गरेर बन्नुहोस् जवान !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१३:०२
काठमाडौँ । सुन्दर हुने चाहना धेरैको हुन्छ । तर विभिन्न प्रकारका केमिकलयुक्त कस्मेटिक सामाग्रीको प्रयोगले आजभोली कम उमेरका व्यक्तिमा पनि अनुहारको छाला चाउरि पर्ने समस्या देखिन थालेको छ । उमेर बढ्दै गएपछि अनुहारको छालामा परिवर्तन
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६१३:३९
काठमाडौँ । सुन्दर हुने बाहानमा महिलाहरु हजारौँ खर्च गरेर ब्युटिपार्लर धाउने गर्छन् । सुन्दर बन्ने बाहनामा हजारौँ खर्च गर्नेहरु त्यसले पछि कस्तो समस्या पार्छ भन्ने कुरा सोच्दैनन् र त पछि पछुताउनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
बेसनको पिठोमा यी चिज मिसाएर अनुहारमा लगाउनुहोस्, ३० मिनेटमै देखिनेछ यस्तो चमक
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: मङ्गलबार, बैशाख ०३, २०७६१३:३२
काठमाडौँ । दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनले अनुहारमा विभिन्न किसिमका समस्याहरु आउन गर्छन् । यस्ता समस्याले गर्दा सुन्दर रुपलाई पनि कुरुप बनाएको हुन्छ । अनुहारमा आएको चाया पोतो पिम्पल्सको कारण अनुहारमा विभिन्न किसिमका दागहरु बन्ने गर्छन्
के तपाई महिला भएर माथिल्लो ओठमा जुंगा आएर हैरान हुनुहुन्छ ? घरमै सजिलो तरिकाले यसरी हटाउनुहोस्
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख ०२, २०७६१४:५५
काठमाडौँ । पुरुषहरुमा जुंगा आउनु सामान्य हो । तर हाम्रो समाजमा महिलाहरु जुंगा आउनुलाई भिन्न तरिकाले हेर्ने गरिन्छ । तर सामान्यतया धेरै महिलाहरुमा पुरुषको जस्तो ठूलो ठूलो जुंगा नआएपनि सामान्य पलाएको हुन्छ । यद्यपी महिलाहरुमा पुरुष